Maxkamadda gobolka Mudug ayaa maanta xukuntay 83 dhalo oo khamri Dry Gene iyo ninkii lagu soo qabtay. – Radio Daljir
Seteembar 20, 2012 10:58 b 0
Gaalkacyo, Sep 20- Maxkamadda gobolka Mudug ayaa maanta xukun 1 sanaa ku riday Cabdi Barre Cabdi oo lagu soo qabtay khamri gaaraya 83 dhalo, iyadoo khamrigii lagu xukumay in la gubo, sidaasna lagu gubay.
Xeer-ilaalinta ayaa dib u dhigay dacwadda sagaal eedaysane oo kale iyo khamri gaaraya 107 oo maan-dooriyaha dareeraha ee khamrigaa ka dib markii ay soo xaadiri waayeen qaar ka mida marqaatiyaashii danbigaas ku caddayn lahaa, waxaan loo balamay in xukunkaas la dhamaystiro maalmaha soo aadan.
Khamrigan oo wadartiisu ay tahay 190 dhalo eedaysanayaashan ay yihiin 9 ayaa ciidanka amnigu waxay ku soo qab-qabteen hawl-gallo ay ka fuliyeen gudaha Gaalkacyo iyo deegaanada ka baxsan, sidoo kale labo danbiile ayaa baxsaday sida uu sheegay xeer-ilaaliyaha.
Dacwadda iyo xukunaddan oo ka dhacay xabsiga weyn ee Gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac,Taliyaha qaybta booliska Mudug G/sarre Jaamac Maxamed Axmed iyo saraakiil kale.
Taliyaha qaybta booliska Jaamac Maxamed Axmed oo war-fidyeenada kula hadlay bannaanka hore ee xabsiga ayaa sheegay inay guul u tahay soo qabashada maan-dooriyahan iyo danbiilayaasha, wuxuuna carabka ku goday inay ka qayb qaadan jireen amni darrada gobolka, hadana magaaladu ay tahay 80%kiiba taasna ay keentay wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka.